ကျွန်တော့် ဘလော့ကို ဆန်းစစ်မှု လုပ်ပါတယ်။
စုစုပေါင်း ဖတ်သည့်အကြိမ်ပေါင်း 5,497,329
1. Myanmar (Burma) 22672
2. United States 1626
3. Singapore 1044
4. Thailand 559
5. Germany 350
6. Malaysia 300
7. Unknown Region 256
8. Russia 156
9. Japan 143
10. South Korea 129
၂၆-၅-၂ဝ၁၆ နေ့ အဖတ်အများဆုံးစာများ
1. Bee pollen ပန်းဝတ်မှုံ အာဟာရ
2. Blood donation rules သွေးလှူခြင်းဥပဒေသများ
3. Contraceptives for women with STI/HIV လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေနဲ့ HIV ရှိ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကိုယ်ဝန်တားနည်းများ
4. Burmeton Poisoning (ဘာမီတွန်) အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း
5. Kegel Exercise for Women (ကီဂယ်လ်) လေ့ကျင့်ခန်း
6. Clomiphene Citrate ကလေးမရနိုင်သူများအတွက်ဆေး
7. Exercise after giving birth ကလေးမွေးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း
8. Infertility Treatments (1) ကလေးရအောင် ကုသနည်းများ (၁)
9. Exercise after Surgery ခွဲစိတ်ထားပြီးသူ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း
10. Constipation (1) ဝမ်းချုပ်ခြင်း (၁)
၂၆-၅-၂၀၁၉ နေ့ အခုပြန်စစ်တော့ သည်လိုတွေ့ပါတယ်။
1. Dog bite ခွေးကိုက်ခံရလျှင် 751
2. Ajinomoto ဟင်းချိုမှုန့် 464
3. Fissure-in-Ano (FIA) စအိုကွဲနာ 452
4. Insomnia အိပ်မရခြင်း 424
5. Arthritis အဆစ်နာ 403
6. BPH ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း 341
7. Sty and Chalazion မျက်စိစွန်ခြင်း 334
8. Phone and Font ဖတ်မရဆိုသူများ သို့မဟုတ် အကြိမ်တရာေ... 315
9. Neck Glands လည်ပင်း အကျိတ် 243
10. Mid Back Pain ကျောလယ်ကနာခြင်း 242
အဲတာကို ဆန်းစစ်ရင် ဘယ်တုန်းက ဘယ်လိုရောဂါတွေ ဖြစ်ကြသလဲကို အကြမ်းအားဖြင့် သိနိုင်တယ်။ နေကောင်းကြပါစေ။